Worm Gear Mugadziri | Yakakwira mhando & yepamusoro tekinoroji - Yakave-Simba
musha / giya / Worm Gear
Worm magiya anowanzo shandiswa kana hombe kumhanyisa kudzikisira kuri kudikanwa. Iyo yekudzikisa reshiyo inoonekwa nenhamba yekutanga kwehonye uye huwandu hwemeno pane iyo honye giya. Asi honye magiya ane inotsvedza yekubatana iyo yakanyarara asi inowanzo gadzira kupisa uye iine yakaderera kudzikisira kugona.
Mazhinji magiya ane honye ane chinhu chinonakidza chisina imwe seti yegiya: iyo honye inogona kushandura giya, asi giya harigone kudzora honye. Izvi zvinodaro nekuti kona iri pahonye haina kudzika zvekuti kana giya richiedza kurimona, kukakavadzana pakati pegiya nehonye kunobata gonye iri munzvimbo.
Iyi ficha inobatsira kumashini akadai seanotakura masisitimu, mune iyo yekuvharira ficha inogona kuita seyakamedura yekutakura kana mota isiri kutendeuka. Imwe kumwe kushandiswa kunonakidza kwehonye magiya kunoshandiswa pane mamwe emhando yepamusoro mota nemarori.
Kana zviri zvigadzirwa zvekugadzira, kazhinji, honye inogadzirwa nesimbi yakaoma nepo honye giya ichigadzirwa nesimbi yakapfava senge aluminium bronze. Izvi zvinodaro nekuti huwandu hwemazino pagiya rehonye hwakareba kana ichienzaniswa nehonye ine huwandu hwayo hwekutanga kazhinji 1 kusvika ku4, nekudzikisira kuomarara kwegiya rehonye, ​​kukweshera pameno ehonye kwakadzikira. Chimwe hunhu hwekugadzira honye kudiwa kwemuchina wakasarudzika wekucheka magiya uye kukuya kwehonye. Iyo honye giya, kune rimwe divi, inogona kugadzirwa nemuchina wekuzeya unoshandiswa kumisikidza magiya. Asi nekuda kwechimiro chakasiyana chemazino, hazvigoneke kutema akati wandei kamwechete nekukochekera mabara egiya sezvingaitwe nemagiya ekumhanyisa.
Iko kunyorera kwehonye magiya kunosanganisira giya mabhokisi, hove pole reels, gitare tambo kugadzirisa tunji, uye panoda kukurumidza kumhanyisa kugadzirisa nekushandisa yakakura yekumhanyisa kudzora inodiwa. Nepo iwe uchikwanisa kutenderedza honye giya nehonye, ​​kazhinji hazvigoneke kutenderera honye nekushandisa iyo honye giya. Izvi zvinodaidzwa kuti yega yekukiya ficha. Iyo yega yekukiya ficha haigone kuve nechokwadi nguva dzose uye nzira yakasarudzika inokurudzirwa yechokwadi yakanaka yekudzora kudzivirira.
Zvakare kune duplex worm giya mhando. Paunenge uchishandisa izvi, zvinokwanisika kugadzirisa backlash, seapo kana mazino anopfeka zvinoda kugadzirisa backlash, pasina kuda shanduko padanho repakati. Iko hakuna akawandisa vagadziri vanogona kuburitsa iyi mhando yehonye.
Iyo honye giya inonyanya kunzi honye vhiri.
Kuratidza 1-32 ye 58 migumisiro
micro honye giya yakatarwa
yendarira honye vhiri
honye giya pinion
diki honye giya rinoisa
giya honye vhiri
single start honye
multi kutanga honye giya
yakapetwa kaviri honye
yakapetwa kaviri honye giya
kaviri kutanga honye giya
honye giya zvinoriumba
cnc honye giya
Vagadziri vhiri vhiri
tsika honye giya
honye giya inoputira
imwe yekutanga honye giya
Stainless simbi honye giya
metric honye magiya
kuvhara vhiri rehonye
Chinyorwa honye giya
honye giya akauraya dhiraivha
honye vhiri uye honye mugodhi
honye uye pinion giya
honye giya unit
chaiyo honye giya
DIY honye giya
globoid honye giya
nema 23 honye giya
nema 17 honye giya